दशैँ मनाउने चिन्तामा नवलपुरका विपन्न माझी मुसहर समुदाय -
दशैँ मनाउने चिन्तामा नवलपुरका विपन्न माझी मुसहर समुदाय
0	October 10, 2021 4:11 pm
बिबिसी को प्रभावशाली महिलाको सुची मा नेपाल कि सपना
रक्क गार्डेन् – ढुङ्गै ढुङ्गाले सजिएको प्राकृतिक बगैंचा
यामु कुमाल ,२४ असोज , नवलपुर ।
भनिन्छ, धनीका लागि रमाइलो र ऐश आराम गर्ने समय हो दशँै, तर गरिबका लागि दशा । यतिबेला नेपालीहरुको घर आँगनमा दशँै भित्री सकेको छ । कतिले दशैँका लागि सरसामान समेत बन्दोबस्त गरिसकेका छन् । तर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने पूर्वी नवलपरासीका माझी मुसहर समुदायका लागि भने दशैँ दशा जस्तै भएको छ ।
जिल्लाको अल्पसंख्यक माझी मुसहर समुदाय यति बेला बडादशैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्तामा छ । कावासोती नगरपालिका १५ शेरगञ्जका माझी मुसहर समुदायलाई दशैँ भित्रिसके पनि आम्दानीको कुनै स्रोत नभएकाले अर्थ अभावमा दशैँका बेला खाने चामल समेत छैन । हरेक वर्ष आउने नेपालीहरुको बडा दशैँमा मिठो खाने र राम्रो लगाउने सपना रहेको भएपनि आर्थिक अवस्था दयनिय हुँदा उनीहरु चिन्तामा छन् ।
कावासोती नगरपालिका १५ शेरगञ्जकी स्थानिय बासिन्दा आशा मुसहर भन्नुहुन्छ , “दशैँ कसरी मनाउने पैसा छैन । पाए त मासुभात भात खान्छौँ, नपाए त्यहीँ भात मात्र हो तरकारी केहीँ छैन। दशैँ त मनाउन हुन्थ्यो साथमा एक पैसा छैन । टिका लगाउन आउछ छोरीबुहारी के गर्ने ?”
शेरगञ्जका माझी मुसहर समुदाय ज्याल मजदुरी गर्ने , साहुको घरमा काम गर्ने, खोला तथा नदीमा माछा मारेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । गत वर्षहरुको दशैँमा खेतबारीमा उत्पादित धानको भात खाने गर्दथ्यो । तर , यसवर्ष अविरल वर्षापछि खोला नालामा आएको बाढीले खेतमा लगाएको धान बगाइदिएको छ । अन्यबेला दिनचार्या जसोतसो बिताइरहे पनि घर आँगनमा दशँै भित्री सकेकाले कसरी मनाउने भनेर पिरोलिएका हुन् ।
“पहिला त दशैँ राम्रैसंग मानिन्थ्यो , काम पनि पाइन्थ्यो घर मै धान हुन्थ्यो कमाएको पैसा पनि बचत हुन्थ्यो । अहिले त एकदुई रुपैयाँ कमाएपछि चामल , तरकारी , नुनखुर्सानी किन्दा र खादा ठिक्क हुन्छ, अब कसरी दशैँ मनाउने ? वर्खामा आएको बाढीले सबै धान लगिदियो ।” स्थानिय बासिन्दा आशा माझीले भन्नुभयो ।
कावासोती १५ शेरगञ्जका विपन्न माझी मुसहर परिवारमा साँझबिहानकै छाक टार्न समस्या भएको छ । चाडपर्वका बेला बालबच्चाहरुले दशैँमा मासु खाने र नयाँ लुगा लगाउने अपेक्षा गरेका छन् तर उनीहरुसंग राम्ररी खाना खुवाउन सक्ने आर्थिक जोहो छैन । साथमा न त पैसा नै छ ,न त काम नै चाडपर्व आउँदा उनीहरुको मनमा खुल्दुली र निराशाले घेरेको छ ।
अर्काे स्थानिय बासिन्दा कृष्ण कुमारी मुसहर भन्नुहुन्छ, “दशैँ भित्रियो, बालबच्चा छन् । नयाँनयाँ कपडा खोज्छन् तर साथमा पैसा छैन कसरी उनीहरुको मन बुझाउने । नयाँ राम्रो लगाउने र मिठो खाने भन्छन् के गर्ने हामी, आउने बाटो नै छैन । अलिअलि ज्याला मजदुरी गरेर कमाए ल्याएको विहान बेलुका खादा ठिक्क हुन्छ । दशैँ आउदा हाम्रो लागि दशा आए जस्तै हुन्छ ।”
दशैँमा मीठोमसिनो खाएर हर्षउमङ्खका साथ मनाउने भनिन्छ तर, नवलपुरको कावसोती १५ शेरगञ्जका ८४ घरधुरी विपन्न माझीमुसहर समुदाय दशैँ कसरी टार्ने भनेर पिरोलिएका छन् ।
दशैंको खानपानमा ध्यान दिन डा. थापाको सुझाव